Ciise: Balanqaadka, Kaniisada Dunida ee Switzerland (WKG)
Axdigii Hore wuxuu inoo sheegayaa in annaga oo bini aadamka ah nalagu abuuray suuradda Ilaah. Waqti fog kamaan qaadanin intaan bani aadamku dembaabnay oo jannada layga saaray. Laakiin eraygii maxkamadda waxaa ku yimid erey ballanqaad. Eebbe wuxuu yidhi: waxaan rabaa inaan cadawga idin kala dhex dhigo (Shaydaan) iyo haweeneyda iyo inta u dhaxaysa farcankaaga iyo farcankeeda; isagu (Ciise) madaxa buu burburin doonaa adiguna waad burburi doontaaCiise) oo ciribta ka istaag »Bilowgii 1:3,15). Xoreeye farcanka Eva wuxuu u imaan lahaa inuu dadka badbaadiyo.
Xal looma arko
Eva waxay u badan tahay inay rajeysey in cunuggeeda koowaad uu noqdo xalka. Laakiin Qaabiil ayaa qayb ka ahaa dhibaatada. Dembigu wuu fidayaa wuuna sii xumaaday. Wakhtigii Nuux waxaa jiray qayb madax furasho ah, laakiin dembigu wuu sii socday. Waxaa jiray dembigii wiilkiisi Nuux iyo ka dib Baabuloon. Banii-adamnimadu waxay sii waday dhibaatooyin waxayna rajeyneysay inay wax ka fiicnaadaan, laakiin waligood ma gaari karaan.
Ballanqaadyo muhiim ah ayaa Ibraahim loo qabtay. Laakiin wuxuu dhintay ka hor intaanu helin ballanqaadyadii oo dhan. Wuxuu lahaa ilmo laakiin waddan ma lahayn mana u ahayn duco quruumaha oo dhan. Ballanqaadkii waxaa loo gudbiyay Isxaaq, dabadeedna Yacquub. Yacquub iyo qoyskiisii ​​waxay yimaadeen Masar oo waxay noqdeen quruun weyn, laakiin iyaga addoonsadeen. Weli, Ilaah wuu oofiyey ballanqaadkiisii. Ilaah baa iyaga Masar ka soo bixiyey yaabab yaab leh. Qaranka reer binu Israa'iil wuxuu sii waday inuu ka dambeeyo ballantii. Mucjisooyinka ma aysan caawin, sida ugu yar ilaalinta sharciga. Way dembaabeen, shakiyeen, oo cidlada dhex wareegeen afartan sano. Ilaah runtiisii ​​wuu rumaystay ballamadiisii, oo wuxuu dadka u keenay dalkii Kancaan;
Iyagu weli waa isku dad dembi badan, oo kitaabka garsoorayaasha ayaa ina tusinaya qaar ka mid ah dembiyadii dadka, maxaa yeelay waxay ku sii dhacday sanam caabudidda. Sidee ayay waligood ugu noqon karaan umadaha kale? Ugu dambayntii, Ilaah wuxuu qabay qabiilooyinkii woqooyi oo reer binu Israa'iil inay maxaabiis ahaan u kaxaystaan ​​reer Ashuur. Waxaad u maleyn laheyd inay taasi Yuhuudda u rogi laheyd, laakiin taasi ma aysan noqon.
Ilaah wuxuu Yuhuuddii sannado badan kaga tegey maxaabiistii Baabuloon, oo in yarna ka dib waxay ku noqdeen Yeruusaalem. Umadii Yuhuuddu waxay noqotay hooskii iskii u horeeyey. Iyagu kuma fiicna dhulkii loo ballanqaaday marka loo eego Masar ama Baabuloon. Way qaylinayeen: Aaway yaboohii Ilaah Ibraahim ugu dhaartay? Sidee u noqon doonaa iftiinka quruumaha? Sidee bay u ballanqaadeen Daa'uud ballanqaadkiisii ​​haddii aannaan nafteenna xakamayn karin?
Xukunka Roomaanka, dadku way niyad jabeen. Qaar baa rajo belay. Qaarkood waxay ku biireen dhaqdhaqaaq iska caabin ah oo dhulka hoostiisa ah. Kuwa kale waxay isku dayeen inay noqdaan kuwa diin badan oo qadarin kara nimcooyinka Eebbe.
Niyad rajo leh
Ilaah wuxuu bilaabay inuu oofiyo ballankiisii ​​ilmo aan sharci ahayn. "Bal ogaada, gabadh bikrad ah baa uuraysan doonta oo wiil umuli doonta, Magiciisana waxaa loo bixin doonaa Cimmaanuu'eel, taasoo micneheedu yahay, Ilaah ha la jiro".Matayos 1,23) Markii hore waxaa loogu yeedhay Ciise - oo leh magaca Cibraaniga "Yehu", oo macnaheedu yahay Ilaah baa na badbaadin doona.
Malaa'igta ayaa u sheegay adhijirrada in Badbaadiye ku dhashay Beytlaxam (Luukos 2,11). Isagu waa badbaadiye, laakiin isagu ma uu badbaadin wakhtigaas. Xitaa wuxuu ku qasbanaaday inuu naftiisa badbaadiyo maxaa yeelay qoysku waa inuu cararo si ilmaha looga badbaadiyo Herodos, oo ah boqorka Yuhuudda.
Ilaah baa inoo yimid, maxaa yeelay, isagu wuxuu dhawray ballanqaadyadiisa, waana aasaas u leh himilooyinkeenna oo dhan. Taariikhda reer binu Israa'iil waxay si isdaba joog ah u muujineysaa in qaababka aadanuhu shaqeynaynin. Ujeeddooyinkayada Ilaah keli kuma aannu gaarno gaaritaankeenna. Eebbe wuxuu ka fakaraa bilowga yar, ee maskaxda halkii uu ka ahaan lahaa awood jireed, guushu markay daciif tahay halkii xoog.
Markuu Eebbe ina siiyay Ciise, wuu oofiyey ballanqaadyadiisi wuxuuna keenay wax kasta oo uu saadaaliyay.
Waxaan ognahay inuu Ciise koray inuu naftiisa u bixiyo madax furasho dembiyadeenna. Isaga ayaa dambi dhaaf inoo keenaya oo waa iftiinka dunida. Wuxuu u yimid inuu ka adkaado Ibliiska iyo dhimashadiisa isaga oo ka adkaaday dhimashadiisa iyo sarakicistiisa ka dib. Waan arki karnaa sida Ciise u oofiyo ballanqaadyadii Ilaah.
Waxaan arki karnaa wax ka badan kuwii Yuhuudda ku dhawaad ​​2000 oo sano ka hor, laakiin weli ma aragno wax walba. Weli ma aragno ballanqaad kasta oo fulinaya. Annagu ma aragno Shayddaanka oo silsilado ku xidhan halkaasoo uusan cidna ku sasabi karin. Annagu weli ma aannu arkin in qof walba yaqaan Ilaah. Wali ma aragno dhamaadka oohinta iyo ilmada, dhimashadda iyo dhimashadaba. Waxaan wali rabnaa jawaabta ugu dambeysa. Ciise waxaan ku leennahay rajo iyo xasilloonaan tan la yeelo.
Ballanqaad baa ka yimid xagga Ilaah, kaas oo uu ku aqbalay wiilkiisa oo lagu shaabadeeyey Ruuxa Quduuska ah. Waxaan aaminsanahay in wixii loo yaboohay oo dhami ay imaan doonaan oo Masiixu dhamayn doono shaqadii uu bilaabay. Waxaan rajeyneynaa inuu midho dhalan doono oo aan ku kalsoon nahay in ballanqaadyada oo dhan la fulin doono. Maaddaama aan ka helnay rajo iyo ballanqaad badbaadada xagga ilmaha Ciise, waxaan filan karnaa rajo iyo ballanqaad kaamil ah oo ku saabsan Ciise sara kacay. Tani waxay khusaysaa koritaanka Boqortooyada Eebbe iyo sidoo kale shaqada Kaniisadda qofkasta oo ka mid ah.
Waxaan rajeyneynaa nafteena
Markii dadku rumaystaan ​​Masiixa, shaqadiisa adiga kugu jirta ayaa bilaabeysa inay korto. Ciise wuxuu yiri waa inaan dhammaanteen dib u dhalanno Haddii aan isaga rumeysanno, Ruuxa Quduuska ah ayaa ina daboolay oo nolol cusub naga dhex abuuraya. Siduu Ciise ballan qaaday, wuxuu noogu imaanayaa nolosheena. Qof ayaa mar yiri: "Ciise wuu dhalan karaa kun jeer, wax faa iido ahna ii tari maayo haddii uusan aniga igu dhalan".
Waxaan fiirin karnaa nafteena oo ka fikirna, "Waxbadan halkaan kuma arko. Kama fiicna wax ka fiican 20 sanadood ka hor. Weli waxaan ku dhibtooday dembiga, shaki iyo dambiile. Aniga oo ah qof cibaado leh oo ka wanaagsan dadkii hore ee reer binu Israa'iil. Waxaan la yaabanahay inuu Ilaahay runtii wax uun ku sameeyo noloshayda. Waxay umuuqataa inaanan horumar sameynin. "
Jawaabtu waa in la xasuusto ciise. Bilowgeena ruuxiga ah uma muuqato mid hadda wanaagsan, laakiin waa sababta oo ah Ilaah ayaa yiri waa wanaagsan yahay. Waxa na dhex jooga waa uun lacag bixin. Waa bilow, waana dammaanad ka timid xagga Ilaah qudhiisa, Ruuxa Quduuska ah oo inagu dhex jiraana waa hoos u dhigidda ammaanta iman doonta.
Luukos wuxuu inoo sheegayaa in malaa'igahu gabyeen markii Ciise dhashey. Waxay ahayd daqiiqad lagu guuleysto, in kasta oo dadku sidaas u arki karin. Malaa'igahu way ogaadeen in guusha ay hubaal tahay maxaa yeelay Ilaahay ayaa u sheegay.
Ciise wuxuu noo sheegayaa in malaa'iguhu farxaan markii dembilaha toobad keeno. Waxay u heesaan qof kasta oo rumaysta Masiixa maxaa yeelay waxaa dhashay ilmo Ilaah. Isaga ayaa daryeeli doona. In kasta oo nolosheenna ruuxiga ahi aysan kaamil ahayn, haddana Ilaah wuu sii shaqeyn doonaa innaga dhexdeenna ilaa uu dhammaystirayo shaqadiisa dhexdeenna ah.
Sida ay rajo weyn ugu jiraan dhalaanka ilmaha Ciise, rajo weyn baa ku jirta ilmaha dhashay Masiixiga cusub. Si kastoo ay ahaataba intaad Masiixi ahayd, rajo weyn baa kuu jirta adiga maxaa yeelay Ilaah baa ku maal galiyay. Kama tanaasuli doono shaqadii uu bilaabay. Ciise caddeyn buu u yahay in Ilaah had iyo goor dhawro ballanqaadyadiisa.